Computer Desk Fekitori - China Computer Desk Vagadziri, Vatengesi
Komputa Tafura YF-GD002
KUSANGANA KWEMAZUVA ANO: Sleek uye yazvino, ino chena imba hofisi komputa tafura ndiko kusangana kwakazara kwekuita, kugadzikana uye dhizaini mune yazvino fomu.
Yemazuva ano yakapusa uye compact komputa dhesiki rehofisi yekumba
Neiri tafura yemazuva ano, zviri nyore kuti iwe Ugadzire hofisi yekumba yezviroto zvako.
Yemazuva ano yemazuva ano komputa tafura yeimba hofisi
Iri remazuva ese rakasiyana dhesiki rinosanganisira mana dhirowa kabhineti, ayo anogona kunge ari kuruboshwe kana kurudyi ruoko zvinoenderana nezvaunoda.
White melamine imba hofisi komputa tafura ine mana mudhirowa epamba fenicha kana hofisi fenicha
Iyi minimalist yakagadzirirwa tafura inouya nemadhirowa mana, 1 keyboard tireyi, uye 1 yakavhurika yekuchengetera masherufu ayo anogona kuve nyore kuwana kune ako mapepa kana zvimwe zvakakosha zvinhu.
Yemazuva ano compact komputa tafura yeimba hofisi ine 1 dhirowa, 2 yakavhurika kabhineti, 1 yakaderera masherufu
Iyi Compact komputa dhesiki rakanakira sarudzo yemubhedhuru, hofisi yekumba, imba diki, kana dorm kamuri, inogona kuiswa mukona kana chero rusvingo kuti ushandise zvizere nzvimbo uye uunze hukuru hwakanyanya kuhupenyu hwako.
Inogona kushandiswa sekunyora madhesiki, nzvimbo dzekushandira, matafura emusangano, komputa / matafura etafura.
Comtemporary inoyevedza imba hofisi komputa tafura l chimiro neakavhurika pasherufu
Iyi komputa tafura ndeyechinyakare uye yemhando dhizaini, inouya ne1 desktop, uye matatu akavhurika masherufu.
Iyo l yakaumbwa komputa dhesiki yakavakirwa yehuremu-basa isina simbi chubhu uye yakakora Hollow-Core Panel, MDF melamine veneered inova moto-chiratidzo, mvura-chiratidzo, uye anti-kukwenya.
Yemazuva ano yazvino Hofisi hofisi hombe L chimiro chekomputa tafura ine dhirowa chifuva.
Nechitarisiko chazvino uye dhizaini inofungidzirwa: Iri tafura rine mitsara yemazuva ano uye kutaridzika kwechimiro kunoenderana nechero imba yekushongedza
Yemazuva ano Kumba hofisi kona l rakaumbwa kunyora kudzidza komputa tafura nesherufu
ZVINOKOSHA, Iri remazuvano uye rakareruka rakaumbwa L-rakagadzirwa nemapuratifomu emapuranga akasimba (E1 bhodhi) uye inowanikwa mune mazhinji mavara melamine yakavezwa pamusoro. (Chena, oak, walnut).
7 dhirowa kunyora komputa tafura yeimba hofisi, yevechidiki 'yekudzidzira kamuri. Mune chena uye oak ruvara. Nesherufu yemabhuku
Maitiro ekusarudza iyo chaiyo tafura yehofisi yako diki yekumba, kamuri yekudzidza, kona yekurara kana imba.
Komputa Tafura YF-GD003
Kumba hofisi Contemporary komputa tafura mune yakakwira gloss chena, iine 3 dhirowa kabhineti, keyboard tireyi
Kuva neruzivo rwakanaka uchishanda kubva kumba, zvakare kushongedzwa kwakanaka kweimba yako yekurara, kana hofisi yekumba.
Nokusimba, dhizaini isingagumi uye kupera kunoshamisa.
Iyi High gloss chena imba hofisi yemakomputa madhesiki isarudzo iri kuwedzera kukurumbira nekuda kwekuita kwavo uye kugona kukwana mune chero zvimiro zvemazuva ano.